Shiikh Shariif oo qaraxii Beledweyn ku eedeeyey Al-qaacida & Al-shabaab oo sheegtay. [Akhris …] – Radio Daljir
Madaxweynaha dawladda KMG ah ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sh Axmed ayaa qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyn ee lagu dilay wasiirkiisii amniga qaran Col: Cumar Xaashi Aadan ku eedeeyey in uu ka danbeeyo ururka Al-qaacida.
Madaxweynaha oo shir jaraa’id ku qabtay xaruntiisa madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegay qaraxaasi in uu ahaa mid ay soo maleegeen kooxo shisheeye ah oo damacsan Soomaaliya in ay ka dhigaan hooy argagixiso, kuwaasi oo uu ku micneyey in ay ka shidaal qaataan ururka Al-qaacida, inkastoo weerarkaasi ay sheegteen ururka Al-shabaab ee dagaalka kula jira dawladdiisa.
Shiikh Shariif oo wajigiisa laga dheehan karay caro xooggan sida uu soo sheegay wariyaha Daljir magaalada Muqdisho ayaa si kulul u canbaareyey ciddii ka danbeysay falkaasi weerar oo uu sheegay in uu ahaa mid doqon-nimo ah oo lagu diidan-yahay dawlad ka dhalata dalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigaye.
Madaxweyne Shariif waxaa uu shirkiisii jaraa’id ee maantay uu ku sheegay maalinba maalinta ka danbaysay Soomaaliya in ay ku soo qul-qulayaan kooxo mintidiin ah oo sida uu sheegay wata calan madow, oo aan meelna laga aqoonsanayn.
Madaxweyne Shariif wuxuu ka digay wax u ku tilmaamay khatar ku soo fooleh Soomaaliya haddii aan haatan beesha caalamku aysan gacan ka geysan sidii looga tagi lahaa arrintaasi, taasi oo uu sheegay in ay saamayn ballaaran ku yeellan karto dhammaanba dunida inteeda kale.
Dhanka kale madaxweynahu waxaa uu ka hadlay dagaalladii ugu danbeeyey ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhaxeeyey dawladda iyo xooggaga isbahaystay ee Al-shabaab iyo Xisbul Islaam, waxaana madaxweynuhu uu sheegay in ay dawladdiisu kaga guulaysatay kooxaha mucaaradka ee ka soo hor jeeday dhammaanba meelihii lagu diriray.
Sidoo kale madaxweynuhu waxaa uu tilmaamay in ay la wareegeen goobo badan oo ay horay gacanta ugu hayn jireen kooxaha dawladdii ku kacsan ee Al-shabaab iyo Xisbul Islaam, haye yeeshee ururradaasi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka madaxweynaha iyagoo sheegay gacanta in ay iyagu ku hayaan goobihii lagu dagaallamay shalay.
Shirka jaraa’id ee uu maanta qabtay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka danbeeyey kadib markii maanta qarax is-miidaamin ah lagu dilay wasiirkii amniga qaran ee dawlladda KMG Cumar Xaashi Aadan, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray Addis-ababa iyo ku dhawaad 10 oo kale oo isku jiray odayaal dhaqmeed iyo illaaladii Hotelka, waxaana uu tacsi tiiraanyo leh uu u diray elehkii ay ka geeriyoodeen dhammaan dadkii maanta ku dhintay qaraxii magaalada Beledweyn.
Waa mas’uulkii ugu sarreeyey oo ka tirsan dawladda Shiikh Shariif Sh Axmed oo ku dhinta gacanta xooggaga mucaaradka ku ah dawladdiisa, waxaana la tilmaamayaa in ay arrintaasi dhabar-jab xooggan ku tahay xukuumadda oo markii horaba la daalaa-dhacaysay soo celinta ammaanka.